जडीबुटी सङ्कलन गर्न जुम्लीवासी पाटनतिर – Sulsule
सुलसुले २०७७ भदौ २९ गते १२:४९ मा प्रकाशित
खलङ्गा, भदौ २९
रावत केही युवाको समूह लिएर जडीबुटी सङ्कलनमा जुटेका छन् । “आम्दानीको कुनै स्रोत छैन”, उनले भने, “परिवारकोे गुजरा चलाउन हम्मेहम्मे भइरहेको छ ।” लगाएको खेतीबालीले छ महिना पनि खानै पुग्दैन । त्यसैले पैसा कमाउनका लागि जडीबुटी सङ्कलन गर्न पाटनतिर गएको उनको भनाइ छ ।
रावतजस्तै अहिले जुम्लाका थुप्रै विपन्न नागरिक जडीबुटी सङ्कलनमा निस्किएका छन् । उनीहरू यो समयमा सेतोचिनी (खिरौला) र पदमचाल जस्ता जडीबुटी सङ्कलन गरी खर्च जुटाउन पाटनतिर लागेका हुन् । तिला गाउँपालिकाकै खाम्म रावत पनि १४ जनाको टिममा जडीबुटी सङ्कलन गर्न हिँडेका छन् । उनले दुई दिनको पैदल यात्रापछि पाटनमा पुगिने राससलाई बताए ।
एक दिनमा सेतोचिनी सङ्कलनबाट न्यूनतम एक हजारसम्म आम्दानी गर्न सकिने उनीहरु बताउँछन् । सेतो चिनी सुकाएको प्रतिकिलो रु. ५०० र काँचो प्रतिकिलो रु. २५ मा बिक्री हुन्छ । एक दिनमा एक जनाले एक क्विन्टलसम्म कोर्न सक्ने ती युवाको अनुभव छ । सेतोचिनी कोर्न भने धेरै दुःख हुने उनीहरू बताउँछन् ।
जडीबुटी सङ्कलनका लागि आवश्यक खाद्यान्न, नून, तेल, भाँडाकुँडा र लत्ताकपडा बोकेर जानुपर्छ । स्थानीयव एक युवा भन्छन्, “सबै बोकेर लिनुपर्छ, दाउरा र पानी पनि टाढाबाट बोक्नुपर्छ । अचानक बिरामी हुँदा समस्या हुन्छ । पाटनमा चट्याङको डर पनि उत्तिकै हुन्छ । ” ज्यानको बाजी थापेर खर्च जुटाउन भए पनि पाटनतिर जान बाध्य भएको ती युवाले सुनाए ।
तातोपानी–७ सर्मीका प्रेम कुँवर पनि दशैँ खर्च जुटाउनका लागि एक महिना पाटनमै बस्ने योजनामा छन् । अव्यवस्थित ढङ्गले सेतोचिनी सङ्कलन हुँदै जाँदा अहिले नजिकनजिक पाउन छाडेको उनले बताए । उनका अनुसार यसको बीउ नपाक्दै सङ्कलन गर्नाले लोप हुने खतरा बढेको छ । कार्तिकदेखि मङ्सिरसम्म राख्ने हो भने यसको बीउ पाक्छ तर आज भोलि नै सङ्कलन गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको उनले बताए ।